सुस्माको बदनाम गर्नेलाई अब के सजाय हुन्छ ? - Kantipath.com
प्रहरीले हिरासतमा लिएको भोलिपल्टै महिनावारी भएकी उनी गर्भवती थिइन् भनेर युट्युब च्यानलहरुले व्यापक प्रशारण गरे । उनको नाम, ठेगाना र तीन पुस्तै खोलिए ।
शुरुदेखि नै भनिएको हो, निरपराधीलाई सतप्रतिशत अपराधी करार गरिँदाको क्षति, त्यसको पुर्ताल र उक्त व्यक्तिको समाजमा पुनर्स्थापना– यी कुराको जिम्मा कसले लिन्छ ?
कोही व्यक्ति कुनै जघन्य अपराधको कसुरदार नै हो भने पनि एउटा जीवित मानिसको सामाजिक पुनस्र्थापनाको मूल्यमा कतिपय कुरा गोप्य राखिन्छन् । रुकुम नरसंहारको घटनासँग जोडिएकी सुस्मा मल्ल ठकुरीकाे हकमा अहिले त्यस्तो स्थिति आइलागेको हो ।
प्रहरीले हिरासतमा लिएको भोलिपल्टै महिनावारी भएकी उनी गर्भवती थिइन् भनेर युट्युब च्यानलहरुले व्यापक प्रशारण गरे । उनको नाम, ठेगाना र तीन पुस्तै नै खोलिए ।
अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आयो, नवराजलाई बोलाएर मार्न लगाएको भनी उनीमाथि लगाइएका सबै आरोप झुठा रहेछन् ।
सत्य एकमात्र हो, मृतक नवराजले उनलाई मन पराएका थिए ।
सामान्यतया यस्तो स्थितिमा अनुसन्धानको म्याद सकिएपछि हिरासतमा राखिएको मानिसलाई रिहा गरिन्छ ।
तर, उनी यो मौकाबाट पनि बञ्चित भएकी छन् । किनभने, अबको जटिल समस्या हो, उनको सामाजिक पुनर्स्थापना ।
अर्थात्,सामाजिक जीवनमा उनको सहज जीवनयापन अब कष्टकर बनेको छ । उनीमाथि अनुचित तवरले प्रश्नहरु तेर्स्याइएको छ ।
आरोप सत्य भएर होइन, अनुचित प्रश्नहरुको घेराबन्दीले उनलाई मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा पुर्‍याउने खतरा छ ।
तसर्थ, सुस्मा मल्ल ठकुरी पुनर्स्थापना केन्द्रमा राखेर उनको जीवनलाई सहज बनाउने आदेश अदालतबाट हुँदैछ ।
यो घटनाले भन्छ, कुनै पनि घटनालगत्तै सञ्चार माध्यम नै अदालत बनेपछि निर्दोषको जीवन कहाँ पुग्छ ?
सञ्चारमाध्यमले घटनासँग सम्बन्धित सूचनाका नाममा काल्पनिक तथ्यहरु खडा गर्ने र समाजमा त्यसैलाई प्रचारित गर्ने कुराले धन्न निर्दोषको जीवन आजसम्म त सुरक्षित छ । यदि ती बालिका हिरासतमा हुन्न थिइन् भने थाहा छैन,आजसम्मको स्थिति के हुन्थ्यो !
सँगै प्रश्न उब्जिएको छ, यसरी राज्यको कुनै पनि अंगमा दर्ता वा सूचिकृत नभएको सञ्चारमाध्यमले चलाएको यो ताण्डवलाई प्रवुध्द समाजले कहिलेसम्म हेरेर बस्छ ? जन आस्थाबाट !
गत जेठ १० गते पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ८ सोतीकी शुष्मा मल्लसँगको अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धकै कारण जारजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनाले ज्यान गुमाए ।
Previous Previous post: तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना गर्दैछौः मन्त्री अर्याल
Next Next post: रुकुम पश्‍चिम ‘हत्याकाण्ड’ : २१ अभियुक्तको सकियो बयान